I-Clenbuterol (CLEN) i-HCL powder (21898-19-1) hplc≥98% | I-AASraw
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / I-Clenbuterol (CLEN) i-HCL powder
4.00 ngaphandle kwe 5 ngenxa ye 8 amanqaku umthengi
SKU: 21898-19-1. Udidi: I-Fat Loss powder
I-AASraw inokwenziwa kunye nobuchule bokuvelisa ukusuka kwigram ukuya kwi-odolo ye-Clenbuterol (clen) HCL powder (21898-19-1), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nenkqubo yokulawula umkhondo olandwayo.
I-Clenbuterol (CLEN) ividiyo ye-HCL yomgubo
|.I-Raw Clenbuterol (CLEN) i-HCL powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-Clenbuterol (CLEN) i-HCL powder
I-molecular Formula: C12H19Cl3N2O
I-II.Raw Clenbuterol (CLEN) Ukusetyenziswa kwe-HCL yomgubo kumjikelezo wesoda
I-Clenbuterol hydrochloride (CAS 21898-19-1) ngokwesiqhelo ibizwa ngegama kwiClen, Clen HCL, ngabakhi bomzimba okanye abasebenzisi bokulahleka kwamafutha.
2. Ukusetyenziswa kweClenbuterol HCL powder Ukusetyenziswa:
IClenbuterol hydrochloride inamandla okutsha kwamafutha. Ikwanesiphumo esikhulu se-thermogenic (yenyusa itemplate yomzimba). I-Clen inyusa uxinzelelo lwegazi kwaye yenza ukuba intliziyo isebenze nzima. Oku kukhuthaza kukhokelela ekunyukeni kwamaqondo obushushu omzimba. Ngokwedatha, ikwabangela i-glycogenolysis (ukuqhekeka kwe-glycogen), yiyo loo nto inceda ukutshisa amanqatha omzimba.
3. Isilumkiso kwi-Clenbuterol HCL powder:
I-4.Further imiyalelo kwi-Clenbuterol HCL powder:
Kwimarike, kukho uninzi lwe-Clen fake, eyiSalbutamol ngokwesiqhelo.
Ukuba une-Clenbuterol esemthethweni kufuneka uthathe ubushushu bakho. Phambi kokuba uqale umjikelo weClen, thatha ubushushu bakho kusasa kwaye xa uku-Clen phinda uyithathe.
Ukuba iyinyani yokwenyani uya kubona ukunyuka okuncinci kubushushu bomzimba. Kuya kufuneka uphinde uve ukungcangcazela kwesandla kunye nokubetha kakhulu kwentliziyo. Abanye bakho abayi kufumana ezi ziphumo kwiidosi ezisezantsi, ngoko ke phezulu idosi ubone ukuba kwenzeka ntoni. Ukuba akukho nanye kwezi zinto eyenzekayo nokuba ukwidosi ye-80-100mcg, kucacile ukuba ukhe wabetha.
5. I-Raw Clenbuterol HCL powder (i-CAS 21898-19-1):
Eyona nto iqhelekileyo isetyenziselwa ubuxoki "Clen" yiSalbutamol, ekwabizwa ngokuba yi-albutamol. Umahluko wayo ikakhulu yichiza. I-Clen ise-40mcg kwaye isalbutamol ikwi-100mg. Unokubetha nje umgubo ocoliweyo kwaye ufumanise ukuba yeyiphi yokwenyani. Ukuvavanywa kokucocwa, unokufuna ukwenza uvavanyo lwe-HPLC.
6. I-Clenbuterol HCL powder Recipes:
Ukwenza i-Liquid Clen HCL powder kwi-100mcg / ml
QAPHELA: Ukuthumela umyalezo ngala macandelo mabini kunokuba yingozi kakhulu, ungabinamakhonkco kunye nawo ngaphandle kokuba uyayazi nyani into oyenzayo, okanye unokuphefumla kakubi. Jonga inqaku elingezantsi.
Iibhotile kunye needropu (kunye nemilinganiselo yokulahla)
Ilitha enkulu ye-12 yeelitha engamanzi
Ukwenza i-100mcg / ml Clenbuterol (Le ndlela yokupheka iyakusebenzela i-T3).
Ukuba nabani na uqaphela nayiphi na imathematics engachanekanga mandazise, ​​kodwa ndicinga ukuba ndisemalini ngale nto.
I-BA iyinto engqongqo yokuphelisa umgubo kunye nokugcina ukungcola kwemveliso egqityiweyo, ndikholelwe akukho nto iyonyanyekayo emva koko iya kuthatha idosi yakho yemihla ngemihla kwaye ifumanise ukuba ezinye iibhaktheriya zimise ikholoni kwi-shit yakho (sele yenziwe loo nto). Ke siza kusebenzisa i-1% kule iresiphi.
Le iresiphi ukuguqula i-1 gram yomgubo (ukuba izibalo zam zichanekile ziya kwenza i-10,000 doses).
Amanzi alahliweyo = Iilitha ze9.9 (9,900 mL). Ewe ilitha, leyo ayisiyompazamo, kwakhona oku kucinga ukuba imathematics ichanekile.)
Inyathelo 1. Beka isuti yeTyvek. Ukuphepha kufuneka ube noClenbuterol.
Inyathelo 2. Beka imaski yepeyinti.
Inyathelo 3. Beka iigloves. Ukucofa kwisuti kunokuzithandela.
Inyathelo 4. Linganisa umgubo ngomyinge. Ufuna i-100% uqiniseke ngethamo.
Inyathelo 5. Yongeza umgubo kwi-beaker.
Inyathelo 6. Yongeza i-BA yokunyibilikisa.
Inyathelo 7. Beka amanzi kwisitya esikhulu.
Inyathelo 8. Yongeza umxube weClen emanzini kwaye udibanise kakuhle.
Inyathelo 9. Beka kwiibhotile kwaye ungeze ngaphezulu.
Imveliso yokugqibela kufuneka ibe yi-10 yeelitha ze-Clen kwi-100mcg / ml.
Le ndlela yokupheka yenzelwe ukuzonwabisa eyintsomi kwaye akufuneki ukuba izame. Ezi ziikhemikhali eziyingozi. Ikwanathiyori kwaye ayikenziwa ngokwenziwa.
--Enye indlela kuphela yokwenza oku ngaphambi kokuba wenze ezi zinto ziibhakethi… zilula kakhulu…
-landa umyinge omnye we-0.2g's (ewe lowo usebenzisa iqhezu legram, ufunda ngokuchanekileyo)
-Sebenzisa i-200mls yeeverrelar kwisitya sokudibanisa sohlobo oluthile, okanye i-beaker
-ongeza i-0.2g's yomgubo ocolekileyo, kwaye usebenzise ubushushu obuphantsi ... oku kulula kakhulu ukuba wenze isiyezi ukuze ube nomonde ungavumi ukuba uqhubeke.
-Emva kokuqala kokucoca isisombululo esinyibilikisiweyo kwisikhongozeli esikhulu sohlobo oluthile ... ndisebenzisa ijekeji yamanzi egalari enqunyulwe ngaphezulu.
Yongeza i-800ml's yamanzi asasazekayo ...
-BAM!… Une-1000ml's yolwelo i-clen @ 200mcg / ml
-Yidwebe kwaye ugcwalise i-50ml okanye i-100ml i-vials kwaye uyenzile.
Amacwecwe eClenbuterol HCL amacwecwe eX -UMNUMXmcg
I-Clenbuterol Hydrochloride 0.02mg
1. Hlanganisa onke amacandelo kumxube weTurbula, kwaye ucinezele kumacwecwe ngoxinzelelo lwe20kN.
2. Uxinzelelo kwiitafile ze-100mg, usebenzisa i-8mm punches.
7. Intengiso yeClenbuterol HCL powder:
IV. Ungayithenga njani i-Raw Clenbuterol HCL powder (i-CAS 21898-19-1); Thenga i-CLEN HCL powder evela kwi-AASraw?